Isu tinokudzidzisa iwe kuti unganyore sei kubva kuApple Music | IPhone nhau
Kuedzwa kwemwedzi mitatu kweApple Music kwapera, maitiro ekudzima kunyorera kwako
Miguel Hernandez | | IPhone nhau, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Apple Music yakauya kuIOS musi wa30 Chikumi 2015, ichivimbisa kutiunzira mimhanzi yakanaka kwazvo pamutengo wakanakisa. Sezvaunenge uchitoziva, nerubatsiro rweApple Music vakatipa chirongwa chavo chemwedzi mitatu yekuyedza, saka kwemwedzi mitatu isu tinogona kunakidzwa nezvakanaka zvese zvekunyoreswa kweApple Music, zvisinei, kunakidzwa iko kunyoreswa taifanira kusimbisa data redu. maakaundi ebhengi uye nekudaro, bvuma kuti kana muyedzo wepachena uyu wapera, mari inoenderana inozobhadharwa kuaccount yedu yebhangi. Asi zvinogona kudaro Apple Music haina kukugonesa, kana iwe haudi kungobhadhara sevhisi, nazvo, unogona kukanzura nyore nyore Apple Music kunyorera Kuburikidza neyako iOS chishandiso kana kubva kuMac yako muTunes, muActualiad iPhone tinokuratidza kuti sei.
1 Apple Music kubhadhara zvirongwa
2 Kanzura kunyorera kubva kuIOS
3 Disable kubva iTunes pane Mac OS
Apple Music kubhadhara zvirongwa
Muchiitiko chekuti iwe uchiri kushamisika kuti wotenga kunyorera here kana kwete, tinokuyeuchidza kuti ndeapi marongero eApple Music ekubhadhara, zvinoenderana nekuti iri nhoroondo yega kana yemhuri.
Nhoroondo yega yega: Mimhanzi yese pane imwechete kifaa, € 9,99 pamwedzi.
Akaundi yemhuri: Mumhanzi wese kusvika pamatanhatu akasiyana emidziyo muboka rimwe chete "Mumhuri", € 14,99 pamwedzi.
Kanzura kunyorera kubva kuIOS
Kuchenesa kunyoreswa kweApple Music kubva kune imwechete Music application paIOS kana kubva kuTunes Store chikamu cheMaitiro chiri nyore kwazvo, Mu iPhone News tinotsanangura kuti:
Isu tinovhura application yemimhanzi uye tinya pane icon yemushandisi mukona yekumusoro kuruboshwe kuti upinde mbiri uye marongero ayo.
Dzvanya pamushonga «ona Apple ID », menyu mutsva ichavhura uye muchikamu Subscriptions tinodzvanya zvakare pane sarudzo mubhuruu inonzi Manage.
Ichatiratidza iyo mhando yekunyorera yatinayo, pamwe neyekupedzisira zuva uye kutanga kwekubhadhara. Pasi pazasi ndiyo otomatiki yekuvandudza maitiro isu atakabata.
Isu tinobvisa switch inowoneka uye sevhisi ichimiswa, zviri nyore kudaro.
Disable kubva iTunes pane Mac OS
Isu tinovhura iTunes.
Tinodzvanya padanda rekupinda data redu.
Mubasa rekupedzisira rakadaidzwa Ruzivo rweAccount, tinodzvanya zvakare.
Isu tinotamira kuchikamu che Zvirongwa uye muchikamu Zvinyorwa, tinodzvinyirira maneja.
Iye zvino isu tinongobaya pamusoro Aihwa panoti "otomatiki kuvandudza".
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Kuedzwa kwemwedzi mitatu kweApple Music kwapera, maitiro ekudzima kunyorera kwako
Ndiri kutsvaga vanhu vashanu vakakomba kuti vave nemimhanzi yemuapuro yemhuri uye ingave € 5 pamwedzi imwe neimwe. Ndine izvi
Sawa Daniel, ndiri kufarira.
Ini handizive kana iko kukanganisa kana chimwe chinhu ... asi ini ndakawana yemahara yekunyorera chinhu ... (ini handina kuimisa) zvinoita here kuti ini ndive neyemahara sevhisi ndisina kuimisa ...?
A MAME emulator inoshanda zvakakwana paApple TV
Maitiro ekuona Mhenyu Mapikicha pane yekare iPhone